Topnepalnews.com | प्रधानमन्त्रीज्यू बाडुली लाग्यो ! तपाईलाई सम्झेर हो कि चिसोले ?
प्रधानमन्त्रीज्यू बाडुली लाग्यो ! तपाईलाई सम्झेर हो कि चिसोले ?
Posted on: May 02, 2016 | views: 323
सौगात पोखरेल - सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नमस्कार
बिहानको साढे पाँच बजे बसको छतमा चढेर पोखरा आएपछि तपाईलाई नसम्झिइरहन सकिँन । एकाबिहानै हिक्क-हिक्क बाडुली लाग्यो त्यो तपाईको सम्झनाले हो कि चिसोले हो थाहा भएन ।
छतमा खचाखच भरिएर क्याम्पसको ड्रेसले सजिएका युवाहरुले तपाईलाई नै सम्झिरहेका थिए । पाँच रुपैयाँ भाडा किन बढाएको भनेर बिद्यार्थीले सहचालकलाई प्रश्न गर्दा पनि तपाईलाई नै सोध भनेको थियो ।
आज तपाई खुब चर्चामा हुनुहुन्छ । उखान टुक्का हालेर सिधा कुरा गर्ने तपाईबाट धेरैलाई आश थियो होला । तर, म तपाईले केही गर्नुहुन्न भन्ने बिषयमा ढुक्क थिएँ । तर, यति साह्रो लाचार हुनुहुन्छ भन्ने चाँहि लागेको थिएन । एक टिम भलिबल खेलाडीको संख्या बराबरको उप-प्रधानमन्त्री बनाएर कीर्तिमानी कायम गर्नुभएको तपाईले पशु मन्त्रालय बनाएर अर्को इतिहास रच्नुभयो ।
चिसोको कारण मृत्यु कुरिरहेको भूकम्पपीडित बस्तीमा गएर भूकम्प स्मृति स्मारक बनाउने कुरा गर्नु हुन्छ । त्योभन्दा मजाक अरु के हुन सक्छ ? के तपाईलाई यस्ता जोक्स भनेर राज्य चल्छ झै लागेको छ ?
जलस्रोतको दोस्रो धनी देशका प्रधानमन्त्रीले हावाबाट बिजुली निकालेर आत्मनिर्भर बन्छु भन्ने कुरा गर्नु भन्दा अर्को हावा कुरा के हुन सक्छ ? जसले बगेका पानीलाई टर्माइनमा हाल्न नसकेर दैनिक ११ घण्टा देश अन्धाकार भएको छ ।
नाकाबन्दीलाई देखाएर कालोबजारी बढेको बढ्यै छ । त्यसको अन्त्यका लागि कुनै पहल भएको छैन । केयो सारा समस्या नाकाबन्दीको कारण हो भने तपाईको घरमा चल्हो निभ्नुपर्ने हो । तपाईको साइरन बजाउँदै दगुर्ने गाडी नचल्नुपर्ने हो । यहाँ त तपाईहरुलाई केही चिजको अभाव नहुने जनतालाई सबैथोकको अभाव हुने भएको छ । के राष्ट्रवादी नारा जप्दै समस्यामा पिल्सनेचाहिँ जनतामात्र हुन् ? नेतालाई मस्ती र जनतालाई सास्ती हुनु भनेको राष्ट्रियता मजवुद हुनु हो ?
आज भर्खर म त सही थिए यी उरण्ठेउला पत्रकारहरु गलत हुन भन्नु भएछ । के तपाई केही गर्न नसक्दा पनि धेरै गरे भनेर समाचार छाप्दिन्छन् भन्ने लागेको थियो तपाईलाई ?
तपाई बालुवाटारमा हिटर बालेर सुत्दा भुकम्पपीडितहरु पालमुनि पराल ओढिरहेका छन् । बजारमा तेलको र ग्यासको लाइन भन्दा अर्को केही देख्न पाइँदैन । के तपाईलाई अझै पनि भारतलाई वा अरुलाई आरोप लगाएर देश चल्छझै लाग्छ ? तपाईहरुले हिजो भन्ने गरेको मण्डले मरिचमान र तपाईको बीचमा अन्तर के छ ? त्यसैले अब उखान टुक्का हाल्दै हावा गफ गर्न बन्द गर्नुस् र नैतिकताको आधारमा समस्या हल गर्न नसकेको भन्दै राजीनामा दिनुहोस् । इतिहासमा असक्षम प्रधानमन्त्रीको नाम लेखाइसक्नु भने अब यहाँ भन्दा असक्षम बन्ने धृष्टता नगर्नुहोस् ।